बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ? – Sky News Nepal
बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ ? कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ?
३ फाल्गुन २०७८, मंगलवार १४:०५ मा प्रकाशित
बालबालिकामा हुने क्यान्सर कस्तो खालको क्यान्सर हो ? नेपालमा बालबालिकामा हुने क्यान्सरको अवस्था र उपचारमा पहुँचको अवस्था के छ ? क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? क्यान्सरको उपचार गर्न कति समय लाग्छ? लगायतका विषयमा डा गिरीसँग रिता लम्सालले गरेको कुराकानीः
बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ ?
हाम्रो वार्डमा किमो थेरापी, नयाँ डाइग्नोसिस र जटिलता भएर भर्ना भएका बिरामी अहिले १८ जना छन्। कहिलेकाँही २६ बेड नै भरिने अवस्था पनि हुनछ। डे केयरमा ८ बेड मात्र भएकाले त्यहाँ चाप नै छ ।
करिब आधा बिरामी रक्त क्यान्सरको भन्नुभयो, बालबालिकामा रक्त क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? यसको लक्षण के हो ?
लक्षणबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको आशंका गर्न सकिन्छ । बालबालिकाको आँखाको नानीमा सेतो फुलो देखियो भने आँखाको क्यान्सर हुनसक्छ। बालबालिकालाई तेल लगाउने क्रममा पेटमा ठूलो डल्लो भेटियो भने त्यो पनि क्यान्सर हुनसक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। ती बाहेक शरीरमा विभिन्न किसिमका गाँठागुठी आएको छ भने नआत्तिकन स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श तथा उपचार सेवा लिनुपर्छ। कुनै पनि बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्यसंस्थामा जाँच गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यसंस्थामा स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा लक्षण र चिन्हको आधारमा जाँच गराउछन्। यदी स्वास्थ्य समस्याको कारण पत्ता लागेन भने बाल रोग विशेषज्ञकहाँ रेफर गर्नुहुन्छ। बाल रोग विशेषज्ञबाट क्यान्सर भएका बालबालिका पत्ता लगाउन सकिन्छ। नेपालमा जहाँ–जहाँ बाल रोग विशेषज्ञ छन्। उनीहरुले क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्छन् ।
सरकारको सहुलियतले सहयोग त पुर्‍याएको छ। तर पर्याप्त छैन। एकलाख रुपैयाँले पुग्दैन । एउटा आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय आमाबुबा आफ्नो सन्तानलाई क्यान्सर भएपछि अर्को शहरमा बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा निकै ठूलो आर्थिक विपत्ति आइपर्छ। त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। उपचारको मात्र होइन, बस्ने खाने र गुमेको आम्दानीलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सरकारले एकलाख दिन्छ। तर बालबालिकाको क्यान्सरको उपचारमा अस्पतालभित्र मात्र कम्तिमा पनि ४ देखि ५ लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यतिमात्र राज्यले वेहोर्दियो भने अभिभावकले अन्य बस्ने खाने व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्थ्यो ।
नेपालमा क्यान्सर भएका बालबालिका कति छन् ? उपचारको पहुँचमा कति छन् ?
यसको केही कारणहरु छन्। एउटा जनचेतनाको कमी हो। नेपालमै बालबालिकामा हुने क्यान्सर निको हुने गरी उपचार हुन्छ । र सरकारी अस्पतालमा कम खर्चमा हुन्छ भन्ने जानकारी सबैमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। अर्को क्यान्सर लागेपछि मान्छे मरिहाल्छ भन्ने भनाइ बालबालिकाको हकमा गलत हो। यो गलत हो भन्ने कुरा सबैलाई बुझाउन सकिएको छैन। क्यान्सर भएका बालबालिका क्यान्सरको उपचार हुने ठाउँसम्म आइपुग्नै सकेका छैनन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालमै क्यान्सर पत्ता लागेपछि घर फर्किरहेका हुनसक्छन् ।
पहिलो कुरा त बाल क्यान्सर सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति हुनुपर्छ। केके गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ? भनेर पहिचान हुनुपर्छ । वार्षिक लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ। त्यसको खर्चको हिसाब गरी खर्चको स्रोतको पहिचान पनि हुनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा जनचेतना वृद्धि गर्ने हो। अहिले राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रले पनि बालबालिकामा हुने क्यान्सरलाई सचेतनाको कार्यक्रम भित्र समावेश गरेको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको नेपालमै उपचार छ । सरकारी अस्पतालमै सस्तोमा उपचार सम्भव छ र निको हुन्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ । तेस्रो कुरा बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिँदैन । तर छिटो पत्ता लगाएर उपचार गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर पत्ता लागाउने क्षमता तथा प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवसको यो वर्षको नारा बेटर सर्भिस पोसिबल थ्रु योर ह्याण्ड अर्थात सबैले सहकार्य गरेमा बाल क्यान्सरको उपचार सेवालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भनिएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर छिटो पहिचान गरेर उपचार हुने केन्द्रसम्म बालबालिकालाई लेराउँ, उपचार नेपालमै सम्भव छ, कम खर्चमै सम्भव छ, सरकारी संस्थाहरुमा नै सम्भव छ। (स्वास्थ्य खबर)